Umsebenzi kunye nomsebenzi | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: umsebenzi kunye nomsebenzi
Uyenza njani imali engathandekiyo kwi-Intanethi?
ezaposwa ngomhla 16.01.2021 16.01.2021
Kule mihla, abantu abaninzi ngakumbi bafuna umthombo owongezelelweyo wokwenza imali kwi-Intanethi. Oku kulula namhlanje kunakwiminyaka embalwa edlulileyo kuba zininzi iiplatifomu zabantu ekuthiwa zii-freelancers ukubonisa izakhono zabo kuzo.
Umncedisi entloko: imisebenzi kunye neempawu zobuqu
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 12.12.2019
Umncedisi wakho kumphathi ngumsebenzi ofunwa kakhulu ngalo mzuzu. Okokuqala, oku kunxibelelene nophuhliso loqoqosho lwentengiso, kuba kwimeko yokhuphiswano olunzima, imeko yezemali yayo nayiphi na inkampani ixhomekeke ...
Inkqubo ye-injineli yolawulo lweshishini: iinkcazo zomsebenzi weenjineli yenkqubo yokulawula inkqubo ezenzekelayo
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 18.10.2019
Yenza ntoni injineli yenkqubo ezenzekelayo yenkqubo? Oku kuya kuxutyushwa kweli nqaku. Malunga nomsebenzi ungawuchaza njani ngokufutshane lo msebenzi kuthethwa ngawo? Injineli yeAPCS ngumntu o ...
Umphathi werestyu: uxanduva, uxanduva. Ungayilawula njani ivenkile yokutyela?
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 21.11.2019
Indawo yokutyela yindawo apho abantu baya kuphumla khona, apho banokuphumla khona, ukungcamla ukutya okumnandi okumnandi, ukumamela umculo omnandi. Kodwa kwabanye, indawo yokutyela ngumsebenzi. Kwaye umphathi werestyu- ...
Feller yehlathi: iimfuno, imisebenzi yomsebenzi
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 13.01.2020
UFeller ngumsebenzi onokuthi ube yindoda yokwenene kuphela. Lo msebenzi ufuna amandla omzimba omangalisayo kunye nezakhono ezilungiswe kakuhle. Kwaye ukuba abafana banobunzima obukhethekileyo kunye neyokuqala ...
Yintoni efunekayo ebomini? Indlela yokwenza okulungileyo?
Ngubani ongazange ebomini bakhe abuze le mibuzo: "Ngubani oza kuba kwixesha elizayo? Nguwuphi umsebenzi oza kuwukhetha? Sasihlala sicinga ukuba kulula kakhulu. Abanye babanga ukuba baya kuba ngabayilo, abanye-oogqirha, ...
Umcoci wamanzi wamachiza: inkcazo yomsebenzi, amanqaku oqeqesho kunye nengxelo
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 11.01.2020
Ubushushu bamandla obunjineli ibisoloko yenye yezona ndawo zifunwa kakhulu nezifunwayo. Kungenxa yoko le nto ubuchwephesha bosebenza ngonyango lwamachiza kubaluleke kakhulu. Zonke ubuqili kunye neempawu zalo msebenzi ziya kuxoxwa ngakumbi. I-WHO…
Sebenza kwaMagnet: uphononongo kunye nezimvo
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 09.01.2020
Sukungxamela ukufumana umsebenzi ungazi kwanto ngawo. Ngethamsanqa, ngoku kulula kakhulu ukwenza oku, enkosi kwi-Intanethi kunye nomnqweno womntu wokwabelana nosizi okanye "ukulahla" inyani. Umzekelo,…
Umqhubi wemfundo. Inkcazo yobume, umvuzo
Umsebenzi wobuchule bokuqhuba yenye yezona zifunwa kakhulu kumazwe amaninzi. Uphuhliso lwezibonelelo zothutho lwonyusa iimfuno zabaqhubi kunye neempawu zabo zobungcali. Ukhetho lo msebenzi aluthethi kuphela ukuvuma ukuchitha ...
Indlela yokusebenza yokujikeleza (ishifti). "Stakhanov": uphononongo lomqeshi obonelela ngomsebenzi ngokujikeleza
Ngexesha apho kunzima kakhulu ukufumana umsebenzi, uninzi lweengcali zihlola amanye amathuba engqesho. Amadoda nabasetyhini abanamandla omzimba kunye nonyamezelo baya ngokuya benomdla kwizithuba ezibonelela ngendlela yokusebenza yokujikeleza. Iimeko ...
Ngubani i-speleologist? Wenza ntoni umqolomba? Yintoni efundwa sisteleologist?
Ngubani i-speleologist? Umbuzo ofanayo uvela kubantu abaninzi abaye beva igama lenye yezona zinto ziyingozi kwaye ziluncedo. Into kukuba lo ayingowona msebenzi uqhelekileyo, oyinyani ...
Ukuqesha ... iindlela kunye neendlela zokutsala abagqatswa abafanelekileyo kwisikhundla
Ukuqesha ligama elifanayo nelithi "ukuqesha," eliphuma kwisiNgesi saseMelika. Eli gama libhekisa kwinkqubo yokutsala, ukukhetha kunye nokwamkela abagqatswa abafanelekileyo bemisebenzi esisigxina okanye yethutyana ...
Umsebenzi wokuzama: "ukupakisha". Akulula kangako…
"Ukukhangela umsebenzi njengopakethi" - ezo ntengiso zinqabile, kuba akukho msebenzi ngelo gama. Amashishini okutya, kunye nezinye iindawo zokugcina izinto, kunye neefektri ezivelisa ...
Umlawuli ngu…. Intsingiselo yegama "governess". Uyintoni umsebenzi wokuhamba?
Xa ufunda okanye uva igama elithi "governess", umntu ngamnye unemibutho ethile. Andazi ukuba nabani na unayo, kodwa kum, umphathi, okokuqala, yimifanekiso yoncwadi kaMariya ...
Umsebenzi wezomkhosi eRussia
Enkosi kuhlaziyo olwenziwe kutshanje ngaphakathi komkhosi oxhobileyo waseRussia, indima yomkhosi kweli lizwe inyuke kakhulu. Ngoku uqeqesho lomkhosi alusosihloko sembeko kunye nomvuzo ophucukileyo, kodwa ...
Umsebenzi omtsha wenkulungwane ye-21. Owona msebenzi ufune kakhulu emva kwe-21 yenkulungwane
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 02.10.2019
Kutheni le nto imisebenzi emitsha ivela? Kungenxa yokuba kuphuhliswa imimandla emitsha ngokwentsingiselo yokoqobo yelizwi nakwokomfuziselo. Abantu baqala ukuba nomdla kwinto eyahluke ngokupheleleyo, benze amanye amacandelo okudala kunye, ...
UMlawuli oLawulayo Uxanduva kunye naMalungelo
Isikhundla se-CEO siyanda kwiinkampani ezichaphazelekayo kwimisebenzi eyahlukeneyo. Xa ufaka isicelo sesi sithuba, kuya kufuneka wazi uxanduva kunye namalungelo analo lo msebenzi. Imisebenzi ye-CEO inezinto ezininzi ...
Kutheni le nto ufuna isincoko esisezantsi senqwelomoya kwiphothifoliyo?
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 13.12.2019
Ngexesha elithile elidlulileyo, kwamkelwa imigangatho emitsha yokuqinisekiswa kwabasebenzi kumaziko emfundo yabantwana abasaqala isikolo. Ukongeza kumaxwebhu aqinisekisa ukuthotyelwa kobungcali kwisikhundla esabanjwayo, kuyimfuneko ukulungiselela isincoko kutitshala wenkulisa. Kwiphothifoliyo, oku ...
Yintoni ubuchwephesha? Isishwankathelo sobuchule
Yintoni umatshini? Kubonakala ngathi yinto eqhelekileyo, akukho nto inzima. Kodwa wakuba uyifumene kancinci, kuyacaca ukuba ayinguye wonke umntu okwaziyo ukuyazi kakuhle. Emva kwayo yonke loo nto, le ngcali igcina ...
Umthungi ngumntu wobugcisa bokuyila
Akusiyo imfihlo ukuba isuti iyalifanela inani ukuba ilungiswe ngokufanelekileyo kwaye ithungwe ngokucocekileyo. Abantu abaninzi bakhetha ukulungelelanisa ukuthungwa kwivenkile yokuthunga. Ngazo zonke iindidi zezinto esele zenziwe, uhlala ufuna into ...
Page 1 Page 2 ... Page 122 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-67 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,916.